အသက် ၂၁ နှစ် - ED၊ ပြန်လည်အသက်ပြန်ရှင်လာခြင်း၊ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်နောက်ဆုံးကုသမှုဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည် - Your Brain On Porn
အသက် ၂၁ - ED၊ ပြန်လည်အသက်ပြန်ရှင်ခြင်း၊ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်နောက်ဆုံးကုသမှုကိုစတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်
ပထမအကြိမ် - ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဇွန် ၉ ရက် - ၂၁ နှစ်။ porn စွဲလမ်း။ ငါ့နောက်ခံကငါ့ဇာတ်လမ်းကို ဦး တည်သည်။ ကျွန်ုပ်သည် ၁၀ နှစ်အရွယ်တွင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ငါ ၉ နှစ်ဝန်းကျင်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုစတင်ခဲ့တယ်၊ ငါဟာ porn အကြောင်းသိပေမဲ့အမြဲတမ်းမရှိဘဲတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတယ်။ အများအားဖြင့်တော့အဲဒါကိုငါမရရှိနိုင်ဘူး။ ၁၂ နှစ်ရောက်တော့ကျွန်မရဲ့ဝမ်းကွဲကညစ်ညမ်းတဲ့မဂ္ဂဇင်းတစ်စောင်ရခဲ့တယ်။ ငါကရံဖန်ရံခါမှတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခဲ့ပေမယ့်ငါ 9% အချိန်, ငါမပါဘဲတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေမယ်လို့ပြောလိမ့်မယ် ၁၃ နှစ်အရွယ်မှာငါလိင်တံကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေဖို့တစ်လကို ၅ ကြိမ်လောက်အစပြုခဲ့ပေမဲ့ငါ့မှာကောင်မလေးတစ်ယောက်ရှိတယ်။ ငါများသောအားဖြင့်ငါ၏အ gf နှင့်အတူထွက်စေလိမ့်မယ်, ငါတို့တစ် ဦး ချင်းစီကတခြားတက်ခံစားရမယ်လို့ငါနောက်ပိုင်းမှာတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေလိမ့်မယ်။ ကျွန်မရည်းစားနဲ့ကျွန်မခွဲခွာပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်မဟာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုမကြာခဏတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေလာတယ်။ ဒီအချိန်မှာငါကတစ်လကို ၁၀ ကြိမ်လောက်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာကတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာဖြစ်တယ်။ သို့သော်လည်းငါသည်မပါဘဲတူညီသောနှုန်းမှာ masturbate လိမ့်မယ်။ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်အချိန်သည် ၁၅ မိနစ်မှ ၂၅ မိနစ်ကြားဖြစ်သည်။ အသက် ၁၈ နှစ်အရွယ်တွင်လျင်မြန်စွာဆင်းလာသည်။
ကျွန်မအိမ်မှာတစ်ဦးတည်းလွယ်ကူသောညစ်ညမ်းမှဝင်ရောက်ခွင့်နှင့်အချိန်တွေအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါ 5-50 ကြိမ်တစ်ပါတ်ရန်, porn နှင့်အတူတစ်ပါတ်7ကြိမ်လှည့်ပတ်အချိန် 10% masturbating ထံမှ porn နှင့်အတူအချိန် 95% သွားလေ၏။ အကြှနျုပျ၏တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေအစည်းအဝေးများဤအချိန်တွင်အကြောင်းကို 35-45 မိနစ်တိုးတက်လာခဲ့သည်။ ငါ၏အစိုက်ထူအားနည်းလာပြီစတင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရံဖန်ရံခါကိုယ်တစ်ဦး 2-4 နေ့ကချိုးပေးပါလိမ့်မယ်။ ငါက overdoing ကြောင့်ငါသည်ဤခဲ့သည်ထင်။ ချိုးပြီးနောက်, ငါ့စိုက်ထူနောက်တဖန်ခိုင်မာတဲ့ခဲ့ကြသည်နဲ့ကျွန်မအပေါ်ဆက်ပြောသည်။
ငါ 20 လှည့်လိုက်တဲ့အခါ။ ငါတော့ဘူးပေါ်မယ့်အရာကိုမျှစိတ်ကူးရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါ porn စွဲခံခဲ့ရသည်လျှင်ငါမေးခွန်းထုတ်ခဲ့သည်။ ငါ porn ရန်, တစ်ပါတ်အချိန် 10% 14-99 ကြိမ် masturbating စတင်ခဲ့သည်။ အကြှနျုပျ၏တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေအစည်းအဝေးများဤအချက်မှာ 2-4 နာရီအကြောင်းကိုကြာခဲ့သည်။ ငါကမပါဘဲ masturbating ကြိုးစားခဲ့ပါကပင်တစ်ဦးစိုက်ထူရဖို့ငါ့ကို 20 မိနစ်ယူလိမ့်မယ်။ ငါတောင်မှဒုက္ခ porn မှစိုက်ထူရတဲ့ရှိခြင်းစတင်ခဲ့သည်။ ငါ, ငါ၏ 2-4 နေ့ကချိုးယူပြန်လာပြီးဒုက္ခကတက်လာပြီရှိလိမ့်မယ်။ ငါ ED နဲ့ကျွန်မပစ္စည်းပစ္စယများတစည်းအကြောင်း Google တွင်ရှာဖွေစတင်ရှိသည်နှင့်အများကြီးကိုရှာဖွေနိုင်ဘူးစဉ်းစားထွက် freaking စတင်ခဲ့သည်။
ဒါကြောင့်ငါကတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုဆက်လက်လုပ်ခဲ့တယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အနည်းဆုံးငါစိုက်ထူနိုင်ခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့်လိုက်တယ်ရရှိသွားတဲ့နေရာအရပ်ဖြစ်၏။ တစ်နေ့မှာဗီဒီယိုတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်နေတုန်းကျွန်မကိုခက်ခက်ခဲခဲရှာတွေ့ဖို့ကောင်းတဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုရှာဖို့ကြိုးစားနေခဲ့တယ်။ ငါမိန်းကလေး -on- မိန်းကလေးဗီဒီယိုဖြစ်ဟန်သောအရာကိုအပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ, ဒါပေမယ့်မကြာမီဒါဟာအမှန်တကယ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါဖြောင့်မတ်ခြင်းနှင့်ငါ့ကိုငရဲထဲကစုစုပေါင်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါကထဲကမှထွက်တော့မည်။ အဆိုပါအရာငါခဲယဉ်းတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ tranny ရဲ့အတွေးကငါ့ကိုနူးညံ့စေတယ်၊ ​​ဒါကငါ့ကိုသိပ်ရှုပ်ထွေးစေတယ်။ အခုရုတ်တရက်ငါခက်တော့မယ်။ ငါတကယ်ဖြောင့်ဖြောင့်မှန်မမှန်မေးခွန်းထုတ်လို့ငါထွက်ပြေးတော့တာပဲ။ ငါမခက်တော့တဲ့အကြောင်းရင်းကငါမိန်းမတွေကိုမဆွဲဆောင်လို့ပဲ။ ဒီဟာကို ၂ နာရီလောက်အကြာမှာ googling လုပ်ပြီးနောက်မှာ၊ ဖြောင့်မတ်တဲ့အမျိုးသားတော်တော်များများဟာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံတွေကိုကြည့်ပြီးတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတတ်ကြတယ်။ သူတို့ကဒီအပြာထဲကသူတို့ကိုဖြစ်ပျက်ကဆိုသည်။ ဒါကကျွန်တော့်ကိုပိုသက်သာစေတယ်။
ဒါကြောင့်အဘယျသို့ငါလုပ်နေတာစတင်ငါပြီးအောင်ချင်ပါတယ်ရှိရာလိင်ကွဲ porn မှအပေါ်ကိုရွှေ့နိုင်အောင်ခက်ခဲငါ့ကိုရရန် tranny porn ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ သတိမထားမိဘဲ, ငါသည်မကြာမီပင်ငါတောင်မှနှစ်ပေါင်းစုံတွဲတစ်တွဲလွန်ခဲ့တဲ့စောင့်ကြည့်ထည့်သွင်းစဉ်းစားကြလိမ့်မည်ဟုဘယ်တုန်းကမှမယ့်အခြားအမညီကြောင်း၏စည်းသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုလွန်ကဲ porn စောင့်ကြည့်ခဲ့သည်။ ငါငါဒီအမှတ်ရကြကုန်အံ့မယုံကြည်နိုင်သောကြောင့်, masturbating ပြုလေ၏ပြီးနောက်စက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်ခံစားစတင်ခဲ့သည်။ ကိုယ့်ကိုငါ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရပ်တန့်နိုင်ဘူး။
ဒီတော့တစ်ပါတ်အကြာအကြောင်းကိုငါခဏကောင်းသောနှင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေဘို့ porn ကိုကြည့်ရပ်တန့်သွားခဲ့ပါသည်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ကောင်းပြီ,4ရက်အကြာမှာငါလုံးဝပြိုကျ။ ငါ porn မှတနေ့4ကြိမ် masturbated ။ ထိုအခါ3ပိုပြီးအဆနောက်နေ့။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမယုံနိုင်ဘူး ဒီတော့ကျွန်တော်မကြာသေးခင်ကလုပ်ခဲ့တာကကျွန်တော့်ကွန်ပြူတာမှာညစ်ညမ်းတဲ့အရာတစ်ခုဖန်တီးလိုက်ပြီးကျွန်တော်သိမ်းထားတဲ့ဗွီဒီယိုအားလုံးကိုဖျက်ပစ်လိုက်တယ်။ ဒါကသင့်တော်တဲ့ပထမခြေလှမ်းလို့ထင်တယ်
UPDATE အောက်တိုဘာလ 14, 2012
လအနည်းငယ်အကြာကတစ်ခု update ကိုရှာဖွေနေသည့်ယောက်ျားတွေမှမျးနညျးပါတ။ ငါအချို့သောပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာပစ္စည်းပစ္စယပေါ်တွင်သွားရုံကွန်ပျူတာပေါ်တွင်မဆိုအချိန်ဖြုန်းမခံခဲ့ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါ porn သို့မဟုတ်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေကိုစောင့်ကြည့်စရာမလိုဘဲသွားဘဲ, ကြောင့်3ရက်သတ္တပတ်ကျော်ကဘယ်လောက်တာရှည်အတိအကျမှတ်မိနေနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။
ငါသော်လည်း relapse ကိုပြု၏။ ဆိုးဆိုးဝါးဝါး။ ငါအကြောင်းမရှိအရာနှစ်ခုခဲ့ထင်ပါတယ်။ သောကြောင့်ငါသွားခဲ့သောပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရာ, ငါကသူတို့ကို၏ချွတ်ကြှနျုပျ၏စိတျနှလုံးအရတစ်ဦးထွက်ပေါက်လိုအပ်တူသောခံစားရတယ်။ သူငယ်ချင်းများအလုပ်လုပ်ခဲ့ပေမယ့်ငါတစ်ရက်ရဲ့အဆုံးမှာအခန်းထဲမှာတစ်ဦးတည်းအိမ်ကနေဆဲဖြစ်ခဲ့သည်။ ဤသူသည်ငါအသစ်တစ်ခုကိုကွန်ပျူတာတယ်အချိန်ကိုလှည့်ပတ်လည်းဖြစ်ခဲ့သည် .. ဒါကြောင့်ငါမဆို filter များရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပေ။
ဒီမယ်ဘယ်မှာဒီတော့ ... သင်ကယောက်ျားတွေကိုငါသိ၏။ ပထမဦးဆုံးအကြိမ် P ကိုမှထားတဲ့ IM, ငါသည်သော်လည်းငါ့အစိုက်ထူတစ်ဦးခြားနားချက်သတိထားမိခဲ့တယျ။ ဒါဟာအလွန်ခက်ခဲခဲ့ပါတယ်နဲ့ကျွန်မ ejaculated ပြီးနောက်ကြောင့် 1-2 မိနစ်ခက်နေ၏။ ဒီနှစ်ထဲမှာဖြစ်ပျက်မထားပါဘူး။ ဒါကဖြစ်ကောင်းသော်လည်းဖြစ်ပျက်နိုငျခဲ့ကွောငျးအဆိုးဆုံးအရာပါပဲ။ ကနှေးကွေးစိုက်ထူခဲ့ကောင်းသည်ဟုခံစားရဘူးလျှင်, ငါနောက်ကျောထဲသို့ရိုက်ယူခဲ့သည်နှင့်လမ်းကြောင်းအပေါ်ပြန်ရောက်တယ်တယ်။ ဒါပေမယ့်ငါ cocky တယ်သွားပါကထားရှိမည်။ ကြောင်းပထမဦးဆုံးအကြိမ်ပြီးနောက်တဖန်ငါတစ်ဝက်နာရီအကြာကကိုပြု၏။ ထိုအခါငါတစ်အောက်ဖက်လိမ်သို့သွားလေ၏။
ငါနောက်ကျော PMO မှထွက်သွားသောအခါ, ဆဲပူအဝတ်အချည်းစည်းအမျိုးသမီးတစ်ဦး၏ဓာတ်ပုံများကိုငါ့ကိုခဲယဉ်းတယ်။ ဒါကတစ်ခုခုကိုခဏတစ်များတွင်ဖြစ်ပျက်မထားပါဘူး။ ထို့နောက်တဖြည်းဖြည်းကျွန်မနောက်ကျောတစ်ကိုယ်တော်မိန်းကလေးများဗီဒီယိုထံသို့ ဝင်. ... ပြီးရင်ပြန်ငါပထမဦးဆုံးကိုယ့်ကိုပြန်မေလတွင်ပြဿနာတစ်ခုရှိခဲ့ပါတယ်သဘောပေါက်သောအခါငါရှိရာမှဆိုးရွားလာခဲ့သည်။
ဒါဟာမကောင်းတဲ့တယ်ဘယ်မှာအခုတော့ ... ဒီဖြစ်ပါသည်။4ရက်အကြာ ... ငါခဏအပေါ်တစ်ဦးအရူးအမူးဖူးကြောင်းမိန်းကလေးတစ်ဦးနှင့်အတူရှိ၏။ သူမသည်အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ ... ငါဆိုလို, လှပသောဖြစ်ပါတယ်။ အရမ်းဂရိတ်ခန္ဓာကိုယ်။ ကောင်းပြီ ... သူမသည်ငါ့အိမျမှာကျနော်တို့အထဲကအောင်ခဲ့ကြသည် ... ငါတစ်ပိုင်းရတဲ့စတင်ခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်ဖြစ်သင့်ရှိရာကအကြောင်း 30% ခဲ့ပေမယ့်မပေး။ ငါပူမိန်းကလေးများနှင့်အတူထွက်စေသောအခါငါအများအားဖြင့် 100% ရပါတယ်။ ကျွန်မသဘောကျတယ်အထူးသဖြင့်သူမြား။ သူမသည်တစ်ပိုင်းသတိပြုမိနှင့်အဆင်းရောက်ရှိနေပြီနှင့်ငါ့ crotch ဆှဲ။ စိတ်ပိုင်း, ငါသည်မီးပေါ်မှာဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါက F သူမ၏ဒါမကောင်းတဲ့ချင်တယ်။ ငါ၏အဒစ်အားဖြင့်သေလွန်သောသူတို့သည်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါက 30% ကိုဆင်းခဲယဉ်းအကြောင်းကို 10% သွားစတင်ခဲ့သည်။ သူသည်ငါ့ဘောင်းဘီကိုချွတ် ယူ. ခက်ခဲကြောင့်ရဖို့ငါ့ကို HJ ပေးခြင်းစတင် ... ဘာမျှမဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ လုံးဝ flaccid ။
ငါ flaccid နေဆဲ ... သူမ၏ fingering နှင့်သူမ၏ထွက်မစားတော့တာပဲ။ ငါသူမ၏ထွက်အစာစားခြင်းနှင့်သူမ၏ fingering စဉ်တွင်, ငါသည်ငါ့နဲ့အခြားလက်နှင့်အတူချွတ် wacking စတင်ခဲ့သည်။ အဘယ်အရာကိုမျှ။ သူမသည်သူမရှေ့မှာကြုံတွေ့ဘယ်တော့မှရဲ့ပြောတယ်။ ကျွန်မသူမအလွန် sexy ကြီးကြောင့်ဖြစ်ကောင်းငါစိုက်ထူရှိသည်ဖို့ငါ့အနိုင်စွမ်း effecting သောယူပြီးတယ်သောခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်ဆေးဝါးခဲ့ကွောငျးသူမ၏ပြောသည် .. သူကသူမ၏မဟုတ်ခဲ့ကြောင်းသူမ၏သို့ပြောသည်။ သူမဝယ်လျှင် Idk ။ ငါဆိုလိုတာ ... ဒါဟာစစ်မှန်တဲ့ပါပဲ။ ကျွန်မခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်ဆေးဝါးယူပြီးငါနှင့်ကသင့်ရဲ့စိုက်ထူဖြစ်ပေါ်လာအောင်နိုင်သလား ... ဒါပေမယ့်ငါ meds ယူပြီးစဉ်တစ်ခုစိုက်ထူနှင့်အတူညစ်ညမ်းမှ masturbate နိုင်ခဲ့သည်။ ဒါနဲ့ပြဿနာကဘာလဲဆိုတာသိကြ၏။
ဤသည် SOOOO fuckin ရှက်စရာဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါမျက်နှာအတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလာကြတယ်နှင့်သူမထွက်ခွာသွားသည့်အခါကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်အထဲကခေါက်ချင်တယ်။ ငါသည်ဤနောက်ဆုံးမှာဖြစ်မည်ကိုနဲ့ကျွန်မကိုယ့်ကိုကိုယ်ရပ်တန့်ဘယ်တော့မှသိသည်။
ဒါဟာသိပ်ချနှေးကွေးသောကွောငျ့အကြှနျုပျသ CPU ပေါ်တွင် filter ကို install လုပ်ထားကြပြီမဟုတ် .. ဒါပေမယ့်ငါကမလိုအပ်ပါဘူး။ ကျွန်မအခုကမယုံနိုင်စရာဖွင့်နိုင်အောင်လှုံ့ဆော်တာပါ။ အရမ်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုမှာချွတ် Pissed ။ ငါတောင်မှ porn ကိုစဉ်းစားလို့မရပါဘူး။ ကိုယ့်ထပ်ခါထပ်ခါငါ့ဦးခေါင်းကနေတဆင့်ရှက်စရာအခိုက်အပြေးစောင့်ရှောက်လော့။
အခုအချိန်မှာငါတစ်နေ့3အပေါ်ပေါ့ .. tmrw နံနက်နေ့က4ရဲ့ start ဖြစ်လိမ့်မည်။
နိုဝင်ဘာလ 30, 2012
နေ့ 50 Update ကို
သငျသညျယောက်ျားတွေငါ၏အတန်ပြန်အတွက်ကြည့်ရှုနိုင်သကဲ့သို့ငါနောက်ဆုံးညဥ့် MO'd ။ ငါ 50 ရက်ပေါင်း hit RIGHT ပြီးနောက်။ ငါသည်အလျင်အမြန်သင်မည်ကဲ့သို့နှင့်အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ပျက်၏ဇာတ်လမ်းပြောပြလိမ့်မယ်။
တစ်ရက် 47 တွင်, ငါသည်ငါ့ဘောလုံးနှင့်တင်ပါးဆုံတွင်းဧရိယာထဲမှာတစ်ခု Achi နာကျင်မှုခံစားစတင်ခဲ့သည်။ ဒါဟာ piss ယူနာကျင်ဖြစ်လာစတင်ခဲ့သည်။ ငါတစ်နေ့ 49 အပေါ်ဆရာဝန်ထံသို့ ဝင်. , ငါ့ရောဂါလက္ခဏာတွေကသူ့ကိုပြောပြသည်ကိုလည်းကျွန်မ 50 နေ့ရက်ကာလ၌ masturbated ကြပြီမဟုတ်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့တယ်။ သူဟာတကယ်ပဲငါ့နာကျင်မှုများ၏အကြောင်းရင်းဖြစ်နိုင်သည်နှင့်ကအလုပ်လုပ်တယ်လျှင်ကြည့်ဖို့ masturbate မှထင်ကဆိုသည်။ ကျွန်မလိုသူ့ကိုပြောပြသည်သော်လည်းငါ့အစီအစဉ်ပဲအိမ်ပြန်နှင့်နာကျင်မှုနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သောနေ့၌ သွား. ငါပြေးဘို့သွားသောအခါ, ငါရှိသောကြောင့်ငါ၏အဘောလုံးအတွက်မကောင်းတဲ့နာကျင်မှုမိနစ်စုံတွဲတစ်တွဲပြီးနောက်ရပ်တန့်ခဲ့ရသည်အဖြစ်နာကျင်မှုတဖြည်းဖြည်းပိုဆိုးလာတယျ။ ငါက "fuck ဆိုတဲ့" ဟုပြောသည်ကြောင့်နာကျင်မှုဖယ်ရှားပစ်ရလိမ့်မယ်လျှင်ကြည့်ဖို့ MO ကိုရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
ငါ3ရက်ပေါင်း hit သည်အထိငါ 50 နာရီငံ့လင့်လျက်နဲ့ကျွန်မစတင်ခဲ့သည်။ ငါရနိုင်ခဲ့တယ် 100% ခက် အဘယ်သူမျှမစိတ်ကူးယဉ်နှင့်အတူအလင်းလေဖြတ်2မိနစ်အကြာတွင်။ ငါတယောက်တည်း sensation မှ masturbating ခဲ့သည်။ ဘယ်အချိန်မှာငါ jizzed ။ သန့်ရှင်းသောဘုရား shit ။ ဒါကကျနော်အတွက်ခဲ့ကြအရှိဆုံးပျြောမှေ့စခံစားမှုအော်ဂဇင်ခဲ့သည် YEARS ။ ငါ orgasmd ညာဘက်ရှေ့တော်၌ထိုခံစားမှုသိပ်ပြင်းထန်သောဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါ edging ခဲ့သည်တူသောဒါဟာခံစားခဲ့ရပေမယ့်ငါမဟုတ်ခဲ့ပေ။ ဒါဟာအမှန်တကယ်မျိုးကိုထိခိုက်နိုင်အောင်ကောင်းသောခံစားရတယ်။
အဆိုပါပေါင်းဘက်တွင်, ငါမ Chaser သက်ရောက်မှုရှိသည်။ ငါ ထိုအချိန်မှစ. PMO ဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ကြပြီမဟုတ်။ ငါပြုလိုက်ပြီးနောက်တကယ်တော့အလွန်စိတ်ကျေနပ်မှုခံစားရတယ်။ ဒါ့အပြင်ငါ့အဒစ်ပိုကြီးဖူးပါ။ ငါသည်ငါ့ဝန်မှုတ်ဖို့အကြောင်းဖြစ်ခဲ့သည်ရှေ့၌ငါကမှာကိုငုံ့ကြည့်, ငါ၏ဒစ်ငရဲအဖြစ်အပြည့်အဝကိုကြည့်ရှု။ မျိုး၏တုန်လှုပ်ဖွယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ နောက်ထပ်ပေါင်းဘက်ငါ sensitivity ကိုအများကြီးပြန်လာသတိပြုမိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ရဲ့သင်အစဉ်အဆက် masturbating စတင်မတိုင်မီ sensitivity ကို 100% မှာနေကြောင်းပြောကြပါစို့။ ငါသည်ငါ့ reboot စတင်မတိုင်မီမိုင်းချအကြောင်းကို 50% မှာခဲ့ပါတယ်။ ငါနောက်ဆုံးညဥ့်, အကြှနျုပျ၏ sensitivity ကိုအကြောင်းကို 85-90% မှာဖွစျကွောငျးပွောဆိုလိမ့်မယ်။ ဒါဟာအကြီးခံစားရတယ်။
အဆိုပါအဆင်မပြေတာတွင်, ငါကိုပြန် set ထင်ပါတယ်။ reboot စဉ်အတွင်း MO ကိုမှာအားလုံးပြန်သင်မသတ်မှတ်ပါဘူး, ဒါပေမယ့်ငါပြန်ဖွင့်နေစဉ်အတွင်းဝေးလွန်းများစွာသောလူ MO ကိုမြင်ကြနှင့် reboot ကျော်6လကြာသွားပြီသွားပါပြီတချို့ကပြောဆိုချက်ကို။ သူတို့အဆက်မပြတ် Moing ကြောင့်ဒီတစ်ခါလည်းကြောင့်ပါပဲ။ Idk ။ ဒါပေမယ့်မျှော်လင့်ဒီလွန်းသည်ငါ့တိုးတက်မှုခေတ္တရပ်ဆိုင်းထားမထားဘူး။ ကျွန်မအစား 120 ၏သော်လည်းငါ့အသစ်ကိုရည်မှန်းချက် 100 ရက်ပေါင်းအောင်ပြု၏။ ဒါ့အပြင်နာကျင်မှုအနိုင်နိုင်သှားကွ၏။ ငါ 1-10 တစ်စကေးပေါ်တွင်နာကျင်မှုကိုငါ MO'd ရှေ့တော်၌7မှာဖွစျကွောငျးပွောဆိုလိမ့်မယ်။ ယင်းနောက်က4မှာဖြစ်ခဲ့သည်။
ငါတကယ် MO'ing နောင်တ။ ငါကဖြောင့်ရက်ပေါင်း 100 ရာ၌ခန့်ထားပြီမယ်လို့ငါသိ၏။ ငါကသာနည်းနည်းင်လျှင်ပင်ငါ, ငါ့တိုးတက်မှုပြန်ထားပြီစေခြင်းငှါတကယ် pissed မိပါတယ်။
ဒီနည်းကိုအလုပ်လုပ် !!!! - ဒီဇင်ဘာလ 15, 2012
ကောင်းပြီ။ ဒါဆို ၅၅ ရက် ၅ မိနစ်လောက်ငါ reboot လုပ်ပြီးတာနဲ့ ၅ ရက်အကြာမှာငါဟာအောင်မြင်တဲ့လိင်ဆက်ဆံတယ်။
သငျသညျအကြှနျုပျ၏ဂျာနယ်မြင်ပါလျှင်ကျွန်မမိန်းကလေးတစ်ဦးနှင့်အတူရှိသောအခါ, 65 ရက်အကြာကငါဆင်းရှိ Dead ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါပြီးသား YBOP အကြောင်းကိုသိပြီးပင်မတိုင်ခင်ပြန်လည် reboot လုပ်ကြိုးစားခဲ့ဘာဖြစ်လို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သိတယ်။ ငါတကယ်ငါသည်ညဦးတိုင်အောင်ပြဿနာတစ်ခုရှိခဲ့ပါတယ်သိတယ်ရုံဘယ်တော့မှမ။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ကျွန်ုပ်သည်ပြန်လည်ရက်တင်ခြင်း၏ပထမ ၅၀ ရက်တွင်အပြားတန်းတန်းရောက်နေသည်ဟုထင်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်ဆရာဝန်ကကျွန်ုပ်အားပြောသင့်သည်ကိုပြောသောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်နေ့ ၅၀ တွင်ကျွန်ုပ် MOD ကိုလုပ်ခဲ့သည် သင်သည်ထိုအကြောင်းကိုကျွန်ုပ်၏ဂျာနယ်တွင်ဖတ်ရှုနိုင်သည်။ ငါ 50% စိုက်ရုံထိရုံမျှစိတ်ကူးယဉ်နှင့်အတူတယ်။ ငါမိနစ်စုံတွဲတစ်တွဲပြီးနောက်သုတ်သင်ပယ်ရှင်းခြင်းနှင့်ကအရမ်းခံစားရတယ်! ၄ ရက်အကြာမှာမိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့တွေ့ခဲ့တယ်။ ငါ reboot ကြောင့်လိင်ဆက်ဆံဖို့မျှော်လင့်မထားခဲ့ဘူး၊ ဒါပေမယ့်တစ်ခုကတစ်ခုကတစ်ခုဆီသို့ ဦး တည်သွားတယ်။
ထိုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်သည်လိင်မဆက်ဆံလိုပါ။ သို့သော်ထိုအခါငါစဉ်းစားမိသည်၊ အံ့သြစရာကအလုပ်ကောင်းကောင်းပဲ။ ငါကွန်ဒုံးကိုတင်နေတုန်းမှာပဲခက်ခက်ခဲခဲနေခဲ့ရတယ်၊ ငါလိင်ဆက်ဆံနေချိန်တလျှောက်လုံး။ ငါလာတာနှစ်မိနစ်လောက်ပဲရှိသေးတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါကခက်ခက်ခဲခဲနေပြီး ၂ ပတ်ပတ်လည်ကိုသွားပြီး ၆-၈ မိနစ်ကြာတယ်။
အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးငါမလိင်ဆက်ဆံခဲ့ဘူး၊ ဒါကြောင့်သန္ဓေတည်ခြင်းကငါ့ရဲ့ reboot အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိမရှိငါမသိဘူး။ ပြီးတော့ငါတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာမျိုးလည်းမလုပ်ခဲ့ဘူး။ ဒါကြောင့်ငါပြန်ပြားချပ်ချပ်၌ငါရှိမရှိသို့မဟုတ်မပါလျှင်ငါမသိရ။ ငါကြိုးစားပြီးတော့ update လုပ်နိုင်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် yeah ... rebooting ကျိန်းသေအလုပ်ဖြစ်တယ်။ ငါ ၅၅ ရက်သာကြာမှငါ့အတွက်အလုပ်လုပ်ခဲ့တာကိုငါတုန်လှုပ်သွားတယ်။ ဒါပေမယ့်နောက်တစ်ခါငါလင်းနို့ပေါ်ကနေအပြားလေးတစ်ခုထဲကိုသွားပြီးအဲဒီမှာရက်သတ္တပတ်အတော်ကြာနေခဲ့တယ်။
LINK - ချီကာဂို '' ဂျာနယ်